Ngaba kunokwenzeka ukuba ukhulelwe ngokukhawuleza ngeComomiphene citrate? | AASraw
/Blog/Clomiphene citrate/I-Clomiphene citrate powder eluhlaza: Ngaba kunokwenzeka ukuba ukhulelwe ngokukhawuleza ngeComomiphene citrate?
ezaposwa ngomhla 12 / 25 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Clomiphene citrate. Ibe 1 Comment.
1.Yintoni iClomiphene citrate? 2.Uyazi: Indlela yeCommiphene ye-citrate yesenzo
I-3. Ulwazi olubaluleke kakhulu: umlinganiselo we-Clomiphene citrate 4. Ndingayifumana njani i-Clomiphene citrate?
5.Ukugcina! Imiphumo emibi yecermiphene 6.Ukukhulelwa ngokukhawuleza kwiClomiphene citrate?
Uvavanyo lwe-7.Clomiphene citrate: amava okwenene avela kumakhasimende 8.Ukuphi ukuthenga umgangatho ophezulu weComomiphene citrate powder eluhlaza kwixabiso lokukhuphisana?
I-clomiphene citrate / i-Clomid ividiyo yefowuni eluhlaza
|.Clomiphene citrate / Clomid Abalinganiswa basisiseko:
igama: Clomiphene citrate / Clomid
1.Yintoni iClomiphene citrate?
I-Clomiphene i-citrate powder yinyango engenayo i-steroidal. Yibangela i-pituitary gland ukukhupha i-hormones efunekayo ukuze kukhuthazwe i-ovulation (ukukhululwa kweqanda kwi-ovary).
I-citomiphene citrate isetyenziselwa kubangele i-ovulation kubasetyhini kunye neemeko ezithile zonyango (ezifana ne-polycystic syndrome syndrome) ekhusela ukuvuthwa kwemvelo. I -Clomiphene citrate ingasetyenziselwa iinjongo ezingaboniswa kule khowudi yeyeza.
2.Uyazi: Cindlela yokwenza i-citiphene citrate
I-Clomiphene citrate yayisanduliswa kwakhona njenge-module-receptor-modulator (SERM) ngenxa yekhono layo lokukhuphisana ne-estradiol kwi-estrogen receptors kwinqanaba le hypothalamus. I-Clomiphene citrate ivimba ingxelo engafanelekanga yokujikeleza i-estradiol kwi-hypothalamus, ukuthintela i-estrogen ekunciphiseni umphumo we-gonadotropin ukukhulula i-hormone (GnRH).
Ngexesha le-Clomiphene unyango lwe-citrate, ubukhulu kunye nobukhulu bemigodi ye-GnRH yanda kwaye ivuselela i-pituitary gland ukukhulula ngakumbi i-FSH ne-LH. Ngako oko, i-FSH ne-LH ivuselela ama-ovari ukuphucula i-oocyte follicles. I-Clomiphene citrate ingavumela ii-oocytes ezininzi ukuba zikhule zibe zikhula kwezinye izigulane. I-Estrogen eveliswa yi-follicles ekhulayo yenza ukuba i-mucus yomlomo ibe yincinci kwaye i-endometrium ibe yanda.
Njengoko i-estradiol ephuma kule follicle iphakama, impendulo enhle kwi-pituitary ibangela ukuba i-FSH / LH iqhubekele kwaye ilandelwe ngokukhululwa kwe-oocyte (ovulation). Xa kuvela i-ovulation, iifom ze-corpus i-luteum, kunye namazinga e-progesterone aphakama njengoko akwenzayo kumjikelezo oqhelekileyo we-ovulatory, kwaye ulungiselele i-endometrium yokufakelwa. I-citomiphene citrate kufuneka isetyenziswe ngaphambi kwexesha lokukhetha okuqhelekileyo kwintolishi ephezulu kwisijikelezo se-ovulatory. Ixesha "lemveli" I-Clomiphene unyango lwekratrate luvela kumjikelezo wesigaba senkoliso yosuku 5 nge-9; Abasetyhini bavusa i-5-10 iintsuku emva komlinganiselo wokugqibela womjikelezo. Nangona kunjalo, ukuqaliswa kwangaphambili kwonyango, iikhosi eziseleyo (okt, ukuya kwii-10 iintsuku), okanye i-Clomiphene citrate izidakamizwa ezifunekayo zixhomekeka kwi-response ye-ovulatory yowesifazane ngamnye.
I-Clomiphene citrate nayo i-estrogen-agonist ebuthakathaka kwaye inokusebenzisana neetrogen-receptor eziqukethe izicubu, eziquka i-ovary, i-endometrium, isondo kunye nomlomo wesibeleko. Kwi-cervix, i-Clomiphene citrate ingaphazamisa ubuchule bemigqomo yomlomo wesibeleko ukuvelisa izifihla ezincinci ezithandwa ngumzimba wesisu kunye nokukhulelwa. Kwamanye amabhinqa, iClomiphene citrate ingenza ukuba iminyango yomlomo yomeleleyo ibe yomeleleyo.
Izifundo ziyaqhubeka ukuvavanya umsebenzi weComomiphene citrate kwiisisu zebele. I-estrogenic iziphumo zeClomiphene citrate zisesibini kwiziphumo eziphambili kwi-hypothalamic-pituitary-ovarian function. I-Clomiphene citrate ayibonisi i-androgenic, anti-androgenic, okanye i-progesational effects, kwaye ayichaphazeli i-pituitary-thyroid okanye i-pituitary-adrenal function. Emva kokupheliswa kwe-Clomiphene ye-citrate yonyango, ngokuqhelekileyo akukho miphumo eqhubekayo ye-pharmacological kwimigqi yesigxina esilandelayo. Nangona kunjalo, kwamanye amabhinqa, ukuvuthwa ngokukhawuleza kuye kwaqhubeka.
Kwizigulane ezikhethiweyo zamabhinqa, i-Clomiphene unyango lwe-citrate luyongezwa ngamanye amayeza ukwenyusa ukuvela kwe-ovulation okanye ukukhulelwa. Ezi zonyango zibandakanya: i-dexamethasone ye-hirsutism okanye i-hyperandrogenism; i-estradiol ukukhupha umlomo wesibeletho somlomo we-clomiphene citrate; i-chorionic gonadotropin (HCG) yokunyusa i-LH-surge ye-ovulation; kunye nokusetyenziswa kwe-metformin okanye i-troglitazone ukucima i-hyperinsulinemia eyenzeka kwezinye izigulane ezinee-ovaries ze-polycystic.
I-Octreotide isetyenziswe njengesigxina kwi-Clomiphene unyango lwe-citrate kwizigulane ezinee-ovaries ze-polycystic ukwenzela ukunciphisa i-androgen secretion, ukunciphisa ama-LH amazinga, kwaye kunokunciphisa iziganeko ze-ovarian hyperstimulation. Iinkqubo zokwenza kwezi zi yobisi zihluke kwiClomiphene citrate kwaye azibonakali ziguqula i-pharmacokinetics ye-clomiphene unyango. Iirejimenti nganye kwezi zonyango ezikhungayo zifuna ukubeka iliso ngokufanelekileyo kunye nexesha lokulawula phantsi komyalelo wezonyango zonyango oluneziphumo zokuzala kunye ne-endocrinology.
Kwindoda ene-idiopathic oligospermia, I-Clomiphene citrate ingasebenza kwi-GnRH ukukhululwa kwi-hypothalamus, okwandisa amanqanaba e-LH ne-FSH akhululwe kwi-pituitary. I-LH ne-FSH ngoko ngokucacileyo ivuselela ama-testicles ukuvelisa i-testosterone kunye nesidoda. Umthamo wesibindi kunye nokunyaniseka kwanda; nangona kunjalo, i-Clomiphene citrate ayinako ukwandisa umthamo wesidoda okanye u-motility.
I-3. Ulwazi olubaluleke kakhulu: umlinganiselo we-Clomiphene citrate
4. Ndingayifumana njani i-Clomiphene citrate?
Sebenzisa i-Clomiphene citrate ngokuchanekileyo njengoko ilawulwa ngugqirha wakho. Landela zonke izikhokelo kwiileyibrari yakho yesigunyaziso. Ugqirha wakho usenokuthi utshintshe i-dose yakho ngezinye izihlandlo ukuqinisekisa ukuba ufumana iziphumo ezilungileyo. Musa ukuthatha eli liyeza kumanani amakhulu okanye amancinci okanye ixesha elide kunconywayo.
Ugqirha wakho uya kwenza iimvavanyo zonyango ukuqinisekisa ukuba awunayo imimiselo eya kukuthintela ngokuphepha usebenzisa iCommiphene citrate.Clomiphene citrate idla ngokuthatyathwa kwiintsuku ze-5, ukuqala ngomhla we-5th of your period of time. Landela imiyalelo yakho kagqirha.
Uya kufuneka ube novavanyo lwe-pelvic ngaphambi komjikelo ngamnye wonyango. Kumele uhlale phantsi koxanduva lugqirha ngelixa usebenzisa le mayeza.Uya kukhwela kwi-5 kwiintsuku ze-10 emva kokuba uthathe i-Clomiphene citrate. Ukuphucula amathuba okuba ukhulelwe, kufuneka ulale ngesondo xa uhamba nge-ovulating.
Ugqirha wakho unokuthi uthathe ubushushu bakho kusasa ngalunye uze ubhale ukufundwa kwakho kwansuku zonke kwitshathi. Oku kuya kukunceda ubone ukuba ungalindela nini ukuvuthwa kufikeleleke.
5.Ukugcina! Imiphumo emibi yecermiphene
Fumana uncedo lwezonyango lwexesha loxakeka ukuba unayo nayiphi na imiqondiso yempendulo yokuphazamiseka kwiClomiphene citrate: imihlathi; ukuphefumula okunzima; ukuvuvukala kobuso bakho, imilomo, ulwimi, okanye umqala.
Abanye abasetyhini basebenzisa eli liyeza bakhula imeko ebizwa ngokuba yi-ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS), ngakumbi emva kokuqala unyango. I-OHSS ingaba yingozi yokuphila. Biza ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unayo nayiphi na impawu ezilandelayo ze-OHSS:
intlungu yesisu, ukutyhulwa;
isicathulo, ukuhlanza, isifo sohudo;
ukufumana isisindo esiphuthuma ngokukhawuleza, ngakumbi ebusweni bakho nakwi-middlesection;
ncinane okanye akukho ukucoca; okanye intlungu xa uphefumula, ukuvutha kwentliziyo ngokukhawuleza, uvakalelwa kukuphefumula (ingakumbi xa ulala phantsi).
Yeka ukusebenzisa i-Clomiphene citrate uze ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba unayo:
ubuhlungu be-pelvic okanye uxinzelelo, ukwandiswa kwendawo yakho ye-pelvic;
kubona ukukhanya kokukhanya okanye "iiplanti" embonweni wakho;
ukwandisa ukuqonda kwamehlo akho ekukhanyeni; okanye ukuphuma kwamanzi okwesisu.
Iziphumo eziqhelekileyo zemihlaba ziquka:
ukufudumala (ukufudumala, ubomvu, okanye ukuvakalelwa);
intlungu okanye isisa;
intloko; okanye ukuphuma kumanzi okanye ukuphawula.
6.Kuphi na ukukhulelwa ngokukhawuleza kwi-Clomiphene citrate?
Ukuze ukhulelwe ngokukhawuleza kunye neClomid, kufuneka u tyelele ugqirha wakho kwi-odokotela. Oogqirha bahlala becela uComomid kwizigulane ezingakwazi ukukhulelwa, ngoko akufanele ube neengxaki zokufumana umntu oya kuthobela. Abanye oogqirha banquma kuphela u-Clomid ukuba uzama ukufumana ukukhulelwa unyaka okanye ngaphezulu. Ngaloo ndlela kubonisa ukuba ngokwenene unemiba yokuzala. Ukuba uyavuma ukuba uzama ukukhulelwa ixesha elincinci, mhlawumbi uya kufumana "unciphisa, yinike ixesha, kwaye kuya kwenzeka" intetho.
Buza i-generic ye-Clomid, i-clomiphene citrate, xa ugcwalisa umyalelo kwi-pharmacy. I-Clomid mhlawumbi ayixutywanga yinshurensi yakho kuba yinkxaso yokuzala, ngoko ufuna ukugcina imali apha uze ufumane inguqulo ephantsi. Iziyobisi azifani nezambatho - igama lomnxeba kunye nokukhonkcoza into efanayo. I-Clomiphene citrate iya kusebenza kunye neClomid ukuze ukwazi ukukhulelwa ngokukhawuleza, kwaye iya kuba yindleko phakathi kwe-$ 25 kunye ne-$ 50 umjikelezo, kuxhomekeke kumyinge wakho. Igama leBrama likaComomid laliya kuba neendleko ezininzi.
Thatha ipilisi enye ngomhla we-3 ngeSuku 7 kwimizuzu yakho yokuya esikhathini. (Abanye oogqirha banokuthi bathathe ngomhla we-5 ngeSuku 9, kodwa abaninzi abantu abaphumelele kwaye bakhulelwe bathatha iClomid ngosuku lwe-3 ngeSuku 7. Xoxa ngogqirha wakho ukuba unomdla, kodwa yinto nje ukukhethwa kwakho.) Awuyi kukulimaza.) Qinisekisa ukuba ubiza ntoni usuku lwe-1 yomjikelezo wakho ukuphuma kwegazi, kungekuphela nje ukubonakala kwento eyenzeka ngaphambi kokuba kuqalwe ixesha elipheleleyo. Umlinganiselo oqhelekileyo weClomid ngu-50mg.
Yeka amaninzi ama-ultrasounds ukugcina imali. Ugqirha wakho unokufuna ukuba ungene kwi-ovulation imihla ngemihla ukuze ubone indlela ama-ovari akho aphendule ngayo. Oku kunokuba luncedo kakhulu, kodwa kubiza kakhulu kwaye kwakhona, i-inshorensi ayifuni. Buza ngokuzithoba ukuba unokweqa i-ultrasounds kule nyanga ngenxa yeendleko. I-ultrasound ayiyi kukunceda ukhulelwe, kodwa iya kubonisa ugqirha wakho ukuba iComomid yenza umsebenzi wayo. Ukuba iindleko kunye nexesha alikho imiba, yiya khona. I-techs ultrasound izakukwazi ukuxelela ukuba unamaqanda aphilileyo onayo, kunye namaqanda asebenzayo, ngaphezulu kwithuba lokukhulelwa.
Ukulala ngesinye isinye imihla ukususela ngomhla we-7. Amadoda ayadinga malunga neeyure ze-48 ukuze akhiwe ngokwenene i-sperm ngokwaneleyo kwiisistim zabo ukuba zikhuphe kalula. Bahamba ezimbini iintsuku emgceni UMSEBENZI WONYE, kwaye emva koko, i-sperm iya kuqala ukunyuka ngamanani. Ukulala ngesondo yonke imihla yomjikelo wakho kuyisimo esibi kwaye akusayi kukunceda ukhulelwe ngokukhawuleza. Enyanisweni, awukwazi ukukhulelwa emva kwemijikelezo eninzi xa ukwenza.
Qala uhlolisise i-mucus yakho yomlomo ngosuku lwe-10 yomjikelezo wakho ukuze ubone ukuba lixesha lokuzama ukukhulelwa. I-mucus yomlomo wesibeleko (i-CM) kufuneka ibe yimanzi kunye nemigqomo, kunye ne-egg white white. Xa i-CM emhlophe yeqanda (i-cervical mucus) iqala, i-ovulation isondele. I-Clomid inomdla wokumisa i-mucus ye-colervus kancane, ngoko abanye abantu batusa ukuthatha uGuififenin (uRobitussin wenza umkhiqizo, kodwa uveliso lubizi kakhulu) usuku ngalunye ukusuka kwiSuku 10 ukuya kwiSuku 16 ukwenza i-CM (i-mucus yomlomo wesibeleko) ibe isidoda. Mhlawumbi ayimfuneko, kodwa ayikwazi ukulimaza.
Qala ukusebenzisa i-ovulation kit yokudibanisa kwi-Day 10 ngokunjalo. Ngomatshini wokukhangela ovulation kunye ne-CM (i-cervical mucus), kufuneka ube nombono obalaseleyo xa unesigqubuthelo, kwaye olo lwazi luyakunceda ukhulelwe ngokukhawuleza! Emva kokuba ikiti ithi u-ovulating, ulala nomhla ngaloo mini nangomso olandelayo. Eli lixesha elinye ulala ngesibini emva kwemihla. Emva koko buyela kwimihla ngemihla ngokude uthanda (ubuncinane iintsuku ze-8 emva kokuhle.)
Thatha uvavanyo lokukhulelwa okanye emva kweSuku 28 ukuba ufuna iziphumo ezichanekileyo. Kutheni uziqhenqa ngokuvavanya yonke imihla (nangona ufa ukukwazi!)? Ukuba ukhulelwe, kuya kubonakala kwintonga ngosuku lwe-28. Iinqwenela ezilungileyo ngokukwenza umthwalo wakho wovuyo kwenzeka!
Uvavanyo lwe-7.Clomiphene citrate: amava okwenene avela kumakhasimende
Ukubona ukuba ukuthatha iComomiphene i-citrate powder eluhlaza kunokukunceda ukhulelwe ngokukhawuleza, sinokuphulaphula abasebenzisi:
8.Ukuphi ukuthenga umgangatho ophezulu weComomiphene citrate powder eluhlaza kwixabiso lokukhuphisana?
1.Uqhagamshelane nathi yethu ye-imeyile yophando, okanye ummeli we-skype ummeli wesevisi (CSR).
aylenmelsin12 / 30 / 2017 kwi-8: 35
Ixesha elininzi kulungile ukuba wabelane ngengxaki. NGUBANI OWAZIYO?? Amagama am nguAylen Melsin ndiye ndaneengxaki zokunamathela kwisibeleko kwaye le nto ndicinga ukuba ufanele uyiqonde. Ekugqibeleni ndakwazi ukukhulelwa umntwana wam emva kweminyaka eyi-7 ngaphandle komcimbi. Ngokwenene le yayiyeyona nto imbi kakhulu. Yayingummangaliso owothusayo mna nomyeni wam. Kuba ndishiywe ndingenakukhetha ngaphandle kokusebenzisa i-Herbal Health Concoction eyayilungiselelwe ukusuka kwi-Roots Herbs ukunceda i-Immune. Ndifumene isisombululo ngokukhangela kwi-intanethi kwaye ndathetha nomthombo othe ngqo malunga nengxaki yam. Igama lakhe ngu-Ahiga kwaye wandixelela ukuba amanye amayeza ayimfuneko aza kuba luncedo njani kwimpilo yabasetyhini, ukunyanga i-Fibroid, iibhubhu zokuqunjelwa kweebhubhu, Ndiye ndamnika ithuba lokuba enze eyona nto ilungileyo. Uthumele ii-Herbs kum kwaye wandinika imiyalelo elula malunga nendlela yokusebenzisa. Emva kweeveki ezimbalwa zokusetyenziswa ndaqala ukuziva ndinesiyezi, ukugabha, ibele lesisa, umhlobo wam endixelele zonke ezi zinto zokucula kokukhulelwa. Ndahamba ndayokukhangela ukuba ndikhulelwe na. Ndiyavuya kuba uThixo enze oku ngeeNotshi zeAhiga. Unokufumana uqhakamshelwano noGqr. Patrick Young nge-imeyile (king@aasraw.com) ngokwenene uziva ngathi ukulahla oku, hayi kubo bonke kodwa kwabo bafuna ukuqala ukuba nabantwana babo.
Ziziphi iingenelo ze-L-carnitine kunye ne-L-carnitine powder?	Ziziphi ezixhaphakileyo zesondo nokuphucula iziyobisi kunye nendlela ezisebenza ngayo?